ओलीको गाउँमा पुगेर किन रिसाए देउवा ? स्टेजमै पर्यो लफडा, भिडियोसहित — Imandarmedia.com
ओलीको गाउँमा पुगेर किन रिसाए देउवा ? स्टेजमै पर्यो लफडा, भिडियोसहित
काठमाडौ। नेपाली काँग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा एकाएक आक्रोशित भएका छन् ।आज पार्टीको वडा अधिवेशन शुरु हुने भएपछि बिहानै खुसी भएका देउवा दिउसो आक्रोशित देखिएका छन् ।
बिहानै भिडियो सन्देश जारी गर्दै देउवाले भनेका थिए, ‘आज म निकै खुसी छु ८ लाखभन्दा बढी नेपाली कांग्रेसका क्रियाशील सदस्यहरु आजबाट १४ औं महाधिवेशनको प्रक्रियामा सहभागी हुनुभएको छ। मैले ती सबैको जोशजाँगर र सहयोगको अनुभुति गरिरहेको छु।’
बिहानै खुसी सुनिएका देउवा दिउँसो भने झोक्किएका छन्। देउवा झोक्किएको भिडियो अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको छ। उक्त भिडियोमा देउवा भक्तपुरका कांग्रेस सभापति दुर्लभ थापासँग झोक्किएको देखिएको छ।
देउवाको पहिलो वाक्य सुनिन्छ, ‘झुट बोल्ने तपाईँ ! सबै न्युजमा जान्छ भोलि यहाँ !’ देउवा आक्रोशित देखेपछि थापाले भनेका छन्, ‘तपाईं चुनाव लडेपनि हराउने भनिरा’छ त महेश बस्नेतले। तपाईंलाई यहाँ चुनाव लड्न चुनौती दिएका छन्।’
त्यसपछि झनै रिसाएका देउवाले मास्क लगाएर केही बोल्छन्। त्यो प्रष्ट सुनिँदैन। लगत्तै थापाले भनेका छन्, ‘लड्नु हुन्न भने त मैले।’ त्यसपछि देउवाले सोध्छन्, ‘को लड्दैछ ? वाहियात।’ त्यसपछि हातले इशारा गर्दै देउवाले थापालाई भनेका छन्, ‘तिमी त खत्तम मान्छे रहेछ।’
उद्घोषणले उद्घोषण जारी राख्छन्। देउवा र दुर्लभको बीचमा रहेका केन्द्रीय सदस्य आनन्दप्रसाद ढुंगानालाई मन्तव्यका लागि बोलाउँछन्। उनको नाम सुनिँदैन। ‘कस्तो कुरा गर्छ यार,’ यहीबीचमा देउवाले यस्तो कुरा भाषणमा गर्नै नहुने सुझाए, ‘चुनाव लड्न चुनौती दिए भनेर भाषण गर्दै हिड्ने तपाई ?’
आज कांग्रेसको ४० बढी जिल्लामा वडा अधिवेशन तय भएको थियो। यही क्रममा सभापति देउवाले राजधानीको नजिकको जिल्ला छाने अधिवेशन उद्घाटनका लागि। क्रियाशील सूची सार्वजनिक भइसकेको जिल्ला थियो भक्तपुर। त्यसो त भक्तपुरका हालका कांग्रेस जिल्ला सभापति थापा पनि देउवा समूहकै हुन्।
विवादका बीच हुन लागेको कांग्रेस अधिवेशन उद्घाटनमा देउवालाई पुग्न सबैभन्दा सजिलो र नजिकको जिल्ला बन्यो भक्तपुर। साढे १० बजेका लागि सुर्यविनायक वडा ५ को कटुञ्जेमा तय गरिएको कार्यक्रममा पुगे देउवा। उनलाई नेवारी बाजागाजासहित स्वागतसमेत गरिएको थियो।
आफ्नो मन्तव्य सकाएपछि आसनतिर जाँदै गर्दा देउवा दुर्लभसँग एकाएक झोक्किएको भिडियो भाइरल भएपछि हामीले थापालाई सोध्यौ स् खास के भएको थियो ? आफूले देउवालाई आफ्नो क्षेत्रमा चुनाव लड्न महेश बस्नेनले चुनौति दिएको प्रसंग उल्लेख गरेपछि सभापति झोक्किएको थापाले बताए।
‘त्यो भिडियो भाइरल भएछ। खासमा अस्ति शेरबहादुर दाइ यहाँ चुनाव लडे जमानत जफत हुन्छ भनेर महेश बस्नेत बास्य थियो नि। मैले हाम्रो नेताको अपमान गर्न भएन भन्ने हिसाबले बोलेको थिएँ,’ भक्तपुरका सभापति थापाले भने, ‘उहाँलाई पनि त्यो कुरा थाह रहेछ। कहाँ म यहाँ चुनाव लड्छु भनेर गाली गर्नुभयो।’
त्यसपछि भने देउवाले बस्नेतलाई दुर्लभ थापालाई हराएर देखाउन चुनौति दिएको उनले बताए। ‘अनि उहाँले मसँग हैन दुर्लभसँग लड भनेर भन्नुभयो,’ हाँस्दै थापाले भने।
सभापति देउवाले कार्यक्रमको सम्बोधनको क्रममा भनेका छन्, ‘यहाँ महेश बस्नेतजीले मलाई चुनाव जित्ने भन्छन्। पहिले दुर्लभ थापालाई हराएर देखाउनुस्, त्यसपछि मसँग लड्न आउनुहोला।’ यो कुराले आफूलाई निकै खुसी लागेको थापाले बताए।
सम्बोधनकै क्रममा देउवा भरसक सबै साथीहरुले… भन्दै गर्दा अड्किएपछि थापाले ‘सर्वसम्मत’ भनेर सम्झाउँदा पनि देउवा झोक्किएका देखिन्छन्। शुरुमा थापासँग बिच्केका देउवाले भने, ‘बोल्नुपर्छ भन्या.. म नि बोलिहाल्छु नि।’
यति भनेपछि देउवाले थपे, ‘सर्वसम्मत किसिमले काम गर्नुहोला। वडादेखि नै महाधिवेशन गर्नुहोला। हाम्रो पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउनुहोला।पार्टीको वडा अधिवेशन सुरु भएको अवसरमा शुभकामना दिँदै उनले स्वस्थ प्रतिस्पर्धाले पार्टीको समग्र सङ्गठनको जग मजबुत बनाउने बताए
। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न नेपाली काँग्रेसलाई बलियो बनाउन जरुरी रहको देउवाको भनाइ छ । ‘नेपाली जनताले बुझिसकेका छन्, बलियो काँग्रेसबाट मात्रै समग्र देशको विकास सम्भव छ ।
त्यसैले ‘बलियो काँग्रेस, समृद्ध देश’ भन्ने नारालाई साकार पार्न म पार्टीका हरेक तहका साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु,’ देउवाद्वारा जारी शुभकामना सन्देशमा उल्लेख छ । आफूले सबै सदस्यहरू र नेतृत्वको जोश, जाँगर र साथको अनुभूति गरिरहेको देउवाले बताए ।
उनले भने, ‘आज म निकै खुसी छु । ८ लाखभन्दा बढी नेपाली काँग्रेसका क्रियाशील सदस्य आजदेखि १४ औ महाधिवेशनको प्रक्रियामा सहभागी हुनु भएको छ र मैले ती सबै सदस्यहरू र नेतृत्वको जोश, जाँगर र साथको अनुभूति यतिबेला गरिरहेको छु ।’
काँग्रेसको त्यो विगतको योगदान, जनताको भरोसा, परिपक्वता र अनुभवका कारण मुलुकको नेतृत्व अहिले फेरि काँग्रेसकै काँधमा आएको उनले बताए । उनले भने, ‘म तपाईंहरुलाई जनताको विश्वास जित्ने गरेर अघि बढ्ने प्रण पनि यो भिडियो सन्देश मार्फत गर्न चाहन्छु ।
हरेक गाउँको मुद्दासँग आफूलाई गाँस्दै, हरेक टोलको भावनाको नेतृत्व गरी बलियो बनाउन काँग्रेस जरुरी रहेको सन्देश हरेक घर–घरमा पुर्‍याउनु हुनेछ भन्ने विश्वास मैले लिएको छु,’ देउवाले भने । संवैधानिक बाध्यता अनुसार कोरोना महामारीकै बीच महाधिवेशन सुरु गर्नु परेको भन्दै सामाजिक दूरी कायम गरी सहभागी कार्यकर्तालाई देउवाको अनुरोध छ ।
यसै गरि , काठमाडौंका ३५ जनप्रतिनिधि माधव नेपालको पार्टीमा लागेका छन्। काठमाडौंका २ स्थानीय तहका उप–प्रमुखसहित ३५ जना नेकपा एमाले छोडेर माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादीमा आवद्ध भएका छन् ।
शुक्रबार २ वटा स्थानीय तहका उप–प्रमुखसहित ३५ जनाले नेकपा एमाले छोडेर नेकपा समाजवादीमा आवद्ध भएको बागमती प्रदेशसभा सदस्य एवम् नेकपा एकीकृत समाजवादी काठमाडौंका अध्यक्ष बसन्त मानन्धरले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार ३५ जना जनप्रतिनिधिले शुक्रबार जिल्ला निर्वाचन कार्यालय काठमाडौंमा नेकपा समाजवादीको पक्षमा सनाखत गरेका हुन् ।
काठमाडौंको शंखरापुर नगरपालिकाकी उप–प्रमुख शुक्रलक्ष्मी श्रेष्ठ, तार्केश्वर नगरपालिकाकी उप–प्रमुख भवानी डोटेल धितालसहित ३५ जना नेकपा एसमा खुलेको अध्यक्ष मानन्धरले बताए ।
अध्यक्ष मानन्धरका अनुसार काठमाडौं महानगरपालिकाका २ जना वडा अध्यक्ष, तारकेश्वर नगरपालिकाका २ जना वडा अध्यक्ष र टोखा नगरपालिकाका एक जना वडा अध्यक्षले नयाँ पार्टी रोजेका छन् ।
यसैगरी काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रवक्तासमेत रहेका वडा नम्बर १५ का अध्यक्ष इश्वर मान डंगोल र वडा नम्बर ७ का वडा अध्यक्ष शुक्रमान डंगोलले पनि नयाँ पार्टी रोजेका छन् ।
त्यस्तै तर्केश्वर नगरपालिका वडा नम्बर २ का रविन्द्र केसी र वडा नम्बर ६ का वडा अध्यक्ष मधु कार्कीले नेकपा एसमा सनाखत गरेका छन् ।
टोखा नगरपालिका वडा नम्बर ९ का अध्यक्ष पनि नयाँ पार्टीमा खुलेको र आगामी २२ गतेसम्म काठमाडौंका धेरै जनप्रतिनिधिहरु आफूहरुको पार्टीमा सहभागी हुने अध्यक्ष मानन्धरले दावी गरे ।
यसै गरि , अर्घाखाँचीको पाणिनी गाउँपालिका उपाध्यक्ष लक्ष्मी गौतमसहितका जनप्रतिनिधिले शुक्रबार नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीका पक्षमा सनाखत गराएका छन् । एमालेबाट निर्वाचित उपाध्यक्ष गौतमसहित अर्घाखाँचीका ४ जना जनप्रतिनिधिले माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी रोजेको जिल्ला निर्वाचन अधिकारी सुरेश भण्डारीले रातोपाटीलाई बताए ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका अर्घाखाँची जिल्ला कमिटी अध्यक्ष रामबहादुर चौहानका अनुसार पाणिनी गाउँपालिका उपाध्यक्ष गौतम, सोही गाउँपालिका–३ का वडा सदस्य ओमप्रकाश भुसाल, सन्धिखर्क नगरपालिका–१ की वडा सदस्य सुमित्रा मुखिया, नेकपा एमाले बाङ्गी गाउँ कमिटीका अध्यक्ष तथा मालरानी गाउँपालिका–५ का वडा सदस्य डालबहादुर चौहानले नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी रोज्दै जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा सनाखत गराएका छन् ।
नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीकी प्रभावशाली नेतृ रामकुमारी झाँक्रीको जिल्ला गुल्मीमा भने अहिलेसम्म कुनै पनि जनप्रतिनिधिले सो पार्टी रोजेर सनाखत गराएका छैनन् । जिल्ला निर्वाचन अधिकारी माया कुँवरले अहिलेसम्म नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीमा सामेल हुनका लागि जनप्रतिनिधिहरु सनाखत गर्न नआएको जानकारी दिइन् । हेर्नुहोस् भिडियाे